Nepal – Nepal Reports
चितवन-उद्योग बाणिज्य संघ चितवनको नेतृत्वमा सहनलाल प्रधान निर्वाचित हुनुभएको छ । राती भएको मतगणनामा प्रधान ३ सय ४३ मतआन्तरले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएको हो । प्रधानले १४ सय ८९ मत ल्याउदाँ उहाँका निकटतम प्रतिद्धिन्द राजु श्रेष्ठले ११ सय ४६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । यस निर्वाचनमा सहनलाल प्रधान प्यानलका पदाधिकारी सहितका बहुमत सदस्य निर्वाचित […]
विहिबार बाट पुर्वी चितवनको टाँडीमा नवौँ रत्ननगर महोत्सव शुरु भएको छ । महोत्सवको उपराष्टपति नन्द बहादुर पुनले उद्घाटन गर्नूभएको थियो । उद्घाटन अगाडी टाँडी बाट शोभा र्याली पनि गरीएको थियो । र्यालीमा बिभिन्न संघसस्था, बिध्यार्थी, क्लव, जनजाती लगायतको उपस्थीती रहेको थियो । हरेक २ वर्षको अन्तारलमा हुने यस रत्ननगर महोत्सवको बिशेष […]
लहान । पछिल्लो केही दिनयता बढ्ेको अत्यधिक चिसोका कारण सिरहामा एक नाबालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण गएराति गोलबजार नगारपालिका–४ निवासी शम्भु साहको छ वर्षीय छोरा लभकुमार साह र गोलबजार–२ लालपुर निवासी ७० वर्षीय रामप्रसाद महतोको मृत्यु भएको हो । जाडोका कारण बेहोस भएका बालक साहको धामीझाँक्री लाउन थालेपछि मृत्यु भएको […]
चितवन । अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष नेपाली युवा विजय सापकोटा नेपाल आउँदा गृहनगर भरतपुर पुगे । युवाहरूसँग एउटा सोचको विकास गरे र अभियानमा सक्रिय भए । अभियान थियो– गुट्खामुक्त भरतपुर महानगर ! सहरको सौन्दर्यताको ह्रास गरिरहेको गुट्खाले युवाको स्वास्थ्यमा पनि भयानक असर गरिरहेको देखेपछि यो सोचको विकास भएको थियो । ‘सहर सौन्दर्यताका लागि यो […]
जाजरकोट । एक सातादेखि फैलिएको रूघाखोकी र भाइरल ज्वरोबाट चार जनाको मृत्यु भएको छ । रूघाखोकीले केही दिनदेखि थलिएका जुनीचाँदे गाउँपालिका– २ मजकोटकी ६५ वर्षीया धनसरा नाथ, ७५ वर्षीय सतरूप शाही र ६२ वर्षीया आइती तिरूवाको मृत्यु भएको स्वास्थ्यचौकी बड्कुलेका इन्चार्ज हरिबहादुर सिंहले बताउनुभयो । नाथको बुधबार र शाहीको बिहीबार मृत्यु भएको हो । त्यस्तै […]
फेसबुकमा भएको गालीगलौजको विषयमा दुई युवतीहरुको समूहवीच ग्याङ फाइट हुँदा ललितपुरको सातदोबाटोमा एक युवती गम्भीर घाइते भएकी छन् । मंगलबार राती सातदोबाटो चोकमा सलिना राई र कोपिला गिरीको समूहवीचको ग्याङ-फाइटमा भएको छुरा प्रहारबाट काभ्रे, बनेपा बस्ने १७ वर्षीया कोपिला गिरी गम्भीर घाइते भएकी हुन्। सातदोबाटोका डिएसपी रामेश्वर यादवका अनुसार फेसबुकमा भएको गालीगलौजको विषयमा बानेश्वर बस्ने […]
एसइईमा प्राक्टिकलको दुरुपयोग !
अर्जुन गिरी- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ‘एसइई’ मा निजी स्कुलका विद्यार्थीले प्रयोगात्मकतर्फ निकै धेरै नम्बर पाएका छन् । तर सैद्धान्तिकतर्फ भने उनीहरुको प्राप्तांक कम छ । शुक्रबार प्रकाशित नतिजा हेर्दा पोखराका अधिकांश निजी विद्यालयका विद्यार्थीको प्राप्तांक त्यस्तो देखिन्छ । ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भने जस्तै निजी विद्यालयले अति कमजोर विद्यार्थीलाई पनि प्रयोगात्मकतर्फ पुरै अंक दिएको पाइएको छ […]
पारिपारिक विखन्डन र गरिबीको चपेटा । परिवारमा सधैं किचलो । मिठो मसिनो खान पाउनको साटो बाबुआमाको कुटाइ । यस्तै बालबालिकाको खोजीमा पोखरामा विभिन्न गिरोह नै सक्रिय छन् । यस्तै १ गिरोहले पोखरा आसपासबाट १४ वर्ष मुनिका ७ बालबालिका जम्मा ग¥यो । राम्रो कपडा लगाउन र मिठो खान पाइने लोभमा परेका उनीहरु केही दिन मख्ख परे […]